Anyị dị njikere inyere Naijiria aka: Russia | odumblog
Anyị dị njikere inyere Naijiria aka: Russia
posted on Jun. 24, 2019 at 7:20 am June 24, 2019
Prime minister obodo Russia bụ Dmitry Medveder ekwuola na ọ dị njikere inyere obodo Naijiria na obodo ndi ọzọ nọ n’Afrika aka n’iwulite obodo ha. O kwuru na nke bụ ihe ọ ga-eme ma ọ bụrụ na ha jikọọ aka ọnụ.
Dmitry kwere nkwa a n’ụbọchị Fraide n’ọgbakọ ndi African Import-Export Bank (Afrexim bank) na Moscow. O kwukwara na n’agbanyeghi ihe isi ike juru ụwa niile, na ọ pụrụ inye aka.
Ọ gara n’ihu kwuo na Russia ga-agbali iwulite mpaghara niile nke obodo a; n’ọrụ ugbo, azụmahịa, ọrụ bekee na mpaghara ndi ọzọ. O kwuru na ha na-atụ anya ezi mmekọrịta nke a ga-eji ntụkwasị ewulite n’obodo ndi dị n’Afrika.
Mazi Gabriel Aduda bụ onye ode akwụkwọ nakwa onye nnọchịanya Naijiria n’ọgbakọ kelere ndi Russia maka ihu ọma ha jiri nabata ndi Naijiria ma kwuo na nkwa ha ga-abụ ihe ga-enyere ndi Naijiria nakwa Afrika niile aka.
Onuorah Jennifer June 24, 2019
MASSOB adọọ ndi Fulani na-achi ehi aka na nti
Ndi o ji egbe aga egbuola mmadu iri na asato na Zamfara